Google mankalaza an'i Wimbledon miaraka amin'ny lalao miafina amin'ny valin'ny fikarohana | Androidsis
Ignatius Room | | Lalao Android
Tsy vao sambany io ary tsy ho izao koa no farany nametrahan'ny mpikaroka fikarohana votoaty mifandraika amin'ny hetsika iray amin'ny valim-pikarohany. Amin'ity indray mitoraka ity, anjaran'ny fifaninanana tenisy Wimbledon ity, iray amin'ireo hetsika tenisy kilalao manan-danja indrindra eran'izao tontolo izao ary tanterahina ankehitriny any Angletera.
Google mamela antsika hankafy a Lalao tenisy style 8-bit raha ampidirintsika ao amin'ny boaty fikarohana ny teny Wimbledon. Ity lalao ity dia manolotra antsika tarehin-tsoratra roa tsy mitongilana izay namely ny baolina tamin'ny harato static tamin'ny karazan-klone Pong klasika izay manome teboka antsika rehefa mahatratra ny baolina isika.
Saka, mpanamory sambondanitra, alika, bera, akoho ... no isan'ny mampiavaka ny mpilalao. Mba hamindra ny mpilalao dia mila fotsiny isika tsindrio ny lafiny ankavanana na ankavia amin'ny efijery. Arakaraka ny hamelezantsika ny baolina dia hitombo ny hafainganam-pandehan'ny lalao.
Raha te hankafy ity lalao mini ity dia tsy maintsy ataontsika izao manaraka izao:
Voalohany, na inona na inona browser na solosaina ampiasaintsika, tsy maintsy ampidirintsika ao amin'ny Google ilay teny hoe Wimbledon.
Manaraka izany, afindrantsika miankavia ny efatra manga mandra-pisehoana baolina tenisy maitso.
Ny fanindriana ny baolina tenisy no hampandeha ny lalao.
Isaky ny mihazakazaka ny lalao amin'ny navigateur mifanaraka amin'izany izahay dia mahita ny fomba nna voatahiry ny isa avo indrindra izay azontsika tratrarina tamin'ny lalao teo aloha, ka raha te-hanao fanamby amin'ny namanao ianao dia tsy maintsy mahatadidy ny maka pikantsary.
Tapitra ny alahady 14 jolay ho avy izao ny fifaninanana Wimbledon ary izao ao amin'ny tapa-potoana roa sisa tavela dia Espaniola roa, Ka raha samy mandresy dia azo tanterahina ny Espaniola farany, izay azo antoka fa manome antoka fa hianjera amin'i Espana ny anaram-boninahitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Google mankalaza an'i Wimbledon miaraka amin'ny lalao miafina amin'ny valin'ny karoka